အကြှနျုပျ၏လိင်တံသေးလွန်းသည်။ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အိုဟုတ်တယ်? မသေချာဘူး ဤသည်လိင်တံအရွယ်အစားအပေါ်အချို့သော 2015 သုတေသနအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
"ငါရေကူးကန်ထဲမှာပဲ!အအေးမိရေကူးကန်မထွက်ပြီးနောက်မိမိအလိင်တံ၏ကျုံ့ "" မှာဂျော့ခ်ျ Costanza ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲ "ဟုအဆိုပါ 1994 * Seinfeld * ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် Hilary ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါ၏အရှည်နှင့် girth ကျော်များစွာကိုလူတို့သညျစိုးရိမျစရာဘို့အဘယ်သူမျှမရယ်မောကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်ယနေ့အထိအရှိဆုံးတိကျလိင်တံအရွယ်အစားတိုင်းတာဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့စိုးရိမ်ပူပန် assuage နိုင်ဘူး။
အစောပိုင်းလေ့လာမှုတော်တော်များများသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံခြင်းအပေါ်တွင်မှီခိုခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းလန်ဒန်မှစိတ်ပညာရှင်ဒေးဗစ်ဗေးလ်နှင့် Maudsley NHS Foundation Trust မှ“ လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းတတ်ကြသည်။ Veale နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည်ရူပီးအချိုးအစားအတိုင်းအတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ထွက်ခွာချိန်တွင်စံသတ်မှတ်ထားသောတိုင်းတာသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးသောသမားတော်များမှအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ * ယနေ့ PublishedUrology International ၏ဗြိတိန်ဂျာနယ်*, သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအသစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ 17 ယောက်ျားတစ်ဦးစုစုပေါင်းကနေတိုင်းတာထည့်သွင်းကြောင်း 15,521 ယခင်ပညာသင်နှစ်စာတမ်းများကနေဒေတာတွေကို synthesizes ။
ဤအချက်အလက်များကသုတေသီများအားပျမ်းမျှတွက်ချက်မှုနှင့်လူသားထုအကြားပျံ့နှံ့မှုအတိုင်းအတာကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်တွက်ချက်နိုင်ခဲ့သည်။ “ ယောက်ျားတွေမှာသူတို့ရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေ၊ မလုံခြုံမှုတွေ၊ စိုးရိမ်မှုတွေဘယ်လောက်များများရှိသလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်အံ့သြမိပါတယ်။ Bloomington အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်မှအပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Debra Herbenick ကဤလေ့လာမှုတွင်မပါ ၀ င်သောအချက်အလက်များသည်ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဖွဲ့၏လေ့လာချက်အရပျမ်းမျှ flaccid, pendulous လိင်တံသည်အရှည်အားဖြင့် ၉.၁၆ စင်တီမီတာ (၃.၆၁ လက်မ)၊ ပျမ်းမျှလိင်တံစိုက်ထူခြင်းသည် ၁၃.၁၂ စင်တီမီတာ (၅.၁၆ လက်မ) ရှည်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ girth တိုင်းတာမှုများသည် flaccid လိင်တံအတွက် ၉.၃၁ စင်တီမီတာ (၃.၆၆ လက်မ) နှင့်စိုက်ထူသူအတွက် ၁၁.၆၆ စင်တီမီတာ (၄.၅၉ လက်မ) ဖြစ်သည်။
အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးခြင်း၏တစ် ဦး ကဂရပ် outlier ရှားပါးဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ၁၆ စင်တီမီတာ (၆.၃ လက်မ) စိုက်သည့်လိင်တံကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိသို့ကျသည်။ ယောက်ျား ၁၀၀ တွင် ၅ ဦး သာ ၁၆ စင်တီမီတာထက်ပိုသောလိင်တံရှိလိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၁၀ စင်တီမီတာ (၃.၉၄ လက်မ) ရှိသောလိင်တံစိုက်ထူမှုသည် ၅ ရာခိုင်နှုန်းမြောက်သို့ကျသည်။ ယောက်ျား ၁၀၀ တွင် ၅ ဦး သာ ၁၀ စင်တီမီတာထက်ငယ်သောလိင်တံရှိလိမ့်မည်။
လူကြီးလူကောင်း, သင်မည်သို့တိုင်းတာပုံကိုကြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်လျှင်သင်လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းအတာကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်။ အရှည်တိုင်းတာမှုများသည်ဆီးခုံမို့မို့ရှိအရိုးမှလိင်တံ၏ထိပ်ဘက်ရှိ glans ၏အစွန်အဖျားအထိပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆီးခုံမို့မို့အရိုးများကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်မည်သည့်အဆီကိုတိုင်းတာမှုမပြုမီချုံ့ထားသည်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုကိုညီမျှသည်ဟုယူဆသောကြောင့်လိင်တံ၏အောက်ခြေသို့မဟုတ်ရိုးတံ၏အလယ်တွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတိုင်းတာသည်။
အဆိုပါသုတေသီများထိုကဲ့သို့သောအမြင့်, ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း, သို့မဟုတ်တောင်မှဖိနပ်အရွယ်အစားကဲ့သို့အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ features တွေလုပ်ဖို့လိင်တံအရွယ်အစားလင့်ထားသည်ရန်မခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိကွောငျးကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ခြေအိတ်နဲ့သူချင်းအကြောင်းကို bedrawn နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအဓိပ္ပါယ်နိဂုံးချုပ်သူဖြစ်ကောင်းကြီးတွေခွကေိုရှိကြောင်းကြောင်းကိုပုံရသည်။ နွားငယ်သားအသုံးပြုသောအချက်အလက်များ၏အများကြီးကော့ကေးဆပ်ယောက်ျား၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကြောင့်သူတို့ရဲ့လေ့လာမှု, ထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့များစုံစမ်းဖို့ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရကြောင်းထောက်ပြပေမယ့်အလားတူ, လေ့လာမှု, လိင်အင်္ဂါအတိုင်းအတာများနှင့်ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်လူမျိုးစုများအကြားမျှသိသိသာသာဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆင်းရဲသောဂျော့ကော့စ်တန်န် (George Costanza) အားသူ၏အားနည်းနေသောယောကျာ်းလေးအတွက်ရယ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်အချို့သောသတင်းများအရယောက်ျား ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာသူတို့၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်ကျေနပ်မှုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ အချို့သည် Veale ၏အဆိုအရမကြာခဏခေါင်းပေါ်တွင်သာရှိနေသောပြaနာအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောခွဲစိတ်ကုသမှုနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေကြသည်။ အမျိုးသားများသည်“ အခြားအမျိုးသားများ [အရွယ်အစား] နှင့်သူတို့မည်သို့ဖြစ်သင့်သည်ကိုအလွန်ပုံပျက်ပုံရသည်” ဟု Veale ကဆိုသည်။
အထီးအဆိုတော်မကြာခဏသူတို့ရဲ့အလွန်ကြီးမားမအင်္ဂါဟုအဘို့ကိုရှေးခယျြထားတဲ့အတွက်ညစ်ညမ်း, အပြစ်တင်ဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလားတူပင် Herbenick အဖြစ်မှန်ထိုသို့သောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟာ 17.78th ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. ၎င်း၏ပိုင်ရှင်နေရာလိုကျသောအခါ7စင်တီမီတာ (98 လက်မ) တစ်ခုစိုက်ထူများအတွက်ပျမ်းမျှအားကြောင်းကိုအခိုင်အမာသောများပြားလှ spam များကို e-mail မှထောက်ပြသည်။ ဒါဟာမဆိုအမှု၌သူတို့အားကြော်ငြာတွေကိုလျစ်လျူရှုဖို့အကောင်းဆုံးရဲ့နွားငယ်သားကပြောပါတယ်။ "မထိရောက်သောလိမ်းသို့မဟုတ်ဆေးသို့မဟုတ်ဆေးပြားရှိပါတယ်။ "
Posted in, ဇီဝဗေဒ
A ယုံကြည်ချက် သင့်ရဲ့လိင်တံသေးငယ်လွန်းကြောင်းကိုသင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့, သုတေသနနှင့်အညီ, အရွယ်အစားစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အဘယ်သူမျှမ bearing ရှိပါတယ်: ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင် penile အရွယ်အစားသက်ရောက်မှု erectile function ကိုလျှော့တွက်ပါသလား?
ဒီနေရာမှာဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကသူ့အဖွဲ့ဝင်အကြောင်းရေးသားတာပါ။
ငါသည်ငါ့လိင်တံနှင့်ပတ်သက်။ အတော်လေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမ - အရင် post မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ - ငါအရေဖျားလှီးခြင်းခံရသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ငါ့ကိုအမြဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ငါတို့နိုင်ငံမှာယောက်ျားတွေတော်တော်များများကအရေဖျားလှီးခြင်းမခံကြဘူး။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ခံစားချက် - ငါဟာမထင်မှတ်တဲ့အရာတစ်ခုလိုလို။
ဒုတိယအချက် - Ive သည်လိင်တံအရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ် (ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏အမာခံအပိုင်းတွင်) ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံအရွယ်အစားကိုများစွာသုတေသနပြုခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်၊ အမျိုးသမီးများကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာ၊ လိင်တံအရွယ်အစားကိုဘယ်လိုတိုးပွားစေသလဲ။ စသည်တို့သည်စျေးကွက်တွင်မည်သို့သောဆေးပြားများဖြစ်သည်။ ။ ငါပင်စင်မြင့်မှာသဘာဝကျကျလိင်တံအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်ဟုအချို့သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ (Jelqing လို့ခေါ်တယ်) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသတိထားမိစရာကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်စွာခံစားခဲ့ရပြီးမည်သည့်အမျိုးသမီးကမျှကျွန်ုပ်ကိုအလိုမရှိပါ။
အနည်းငယ်အခြားပျော်စရာအချက်အလက်များသည်ယခု။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံနာရီသည် ၁၆ စင်တီမီတာအတွင်းစိုက်သောအခါ ၆.၃ လက်မရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့ကြီးမား pornstar ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ နှစ်ကြာလက်ထပ်ပြီးနောက်ရက် ၃၀ ပြန်လည်စတင်ပြီးတဲ့နောက်ငါသဘောပေါက်လာတာကတော့စစ်မှန်သောဘ ၀ ၌ကြီးမားသောညစ်ညမ်းမှုကြယ်ပွင့်သည်မိန်းမများထင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့မနှစ်လိုဖွယ်ရာမဟုတ်ပါ။
ငါ့ရဲ့ပျမ်းမျှ ၆ လက်မနဲ့ငါ့ဇနီးကို ၁၀၀% ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘ ၀ ၌အဓိကပြissuesနာတစ်ခုမှာအချို့သောလိင်ရာထူးများ (အချို့သောကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးရာနေရာများ * sob *) တွင် - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်သူမ၏သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုနာကျင်စေသည်။ ဒီတော့ထူးဆန်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု - ငါတကယ်တမ်းလက်မပိုတိုတဲ့လိင်တံရှိခဲ့ရင် - ငါ့ဘ ၀ ရဲ့အများစုအတွက်ငါယုံကြည်တာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တယ် - ဒါကငါ့ကိုဆန့်ကျင်ဖို့မလိုဘဲသူမကိုနာကျင်မှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲပိုပြီးရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ (ကျွန်ုပ်ကိုမှားအောင်မလုပ်ပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံသေးသေးလေးကိုလိုချင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ) ပြောပါက ၁၀ လက်မအရွယ် pornstar dick ဆိုပါကကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လုံးဝအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြားအမှန်တရားမှာမိန်းမအများစုသည်လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်း ၃ မှ ၇ လက်မအကြား (အများစုမှာအတိမ်အနက်အနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိသည်) ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင့်တွင် ၁၀ လက်မအရွယ်ဒစ်တစ်လုံးရှိပါကသင်အခြေခံအားဖြင့်မစွမ်းနိုင်ပါ။ သူမ၏အတော်လေးပြင်းထန်သောအဆင်မပြေဖြစ်စေခြင်းမရှိဘဲမိန်းမအားအပြည့်အဝထိုးဖောက်။ ။ ။ နှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ တွင်မိန်းမအများစုသည် ၁၀ လက်မအရွယ်လိင်တံကိုသူတို့၏သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသို့ထပ်ခါထပ်ခါမပျော်ဝင်စေရန်အထူးသဖြင့်မနှစ်သက်ကြပါ။
ဤအရာအလုံးစုံပြောဆိုခြင်း - ငါ porn သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်ကိုမည်သို့အရှိန်မြှင့်ပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်မံနားလည်သဘောပေါက်လာသည် - ငါအချိန်ပြန်လှည့်စားလိုသောဆန္ဒရှိသည် - စိုးရိမ်မှုများ၊ သုတေသနပြုမှုများ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသည်လွန်စွာ ၁၅ နှစ်လောက် ၁၅ နှစ်ကြာမျှမထင်မှတ်လောက်သောကြီးမားသောညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်များကိုကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ပျက်စီးယိုယွင်းခဲ့သည်။
ငါ့အိမ်ထောင်ရေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေချာပေါက် (နှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အလွန်ကြီးမားသည်ဟုထင်သည်ဟူသောအချက်ကို Hahaha ဟုခေါ်သည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှုပြန်လည်တဖြည်းဖြည်းရလာခြင်းနှင့်သဘာဝမကျ၊ Porn သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားကြီးခြင်းကိုအမှန်တကယ်ခိုးယူသွားပြီးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မမှန်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုပေးသည်။ (နှင့်အမျိုးသမီးများလိုချင်သောအရာ)
ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ မင်းမှာအလားတူယုံကြည်မှုပြissuesနာတွေရှိခဲ့ရင်ငါပြောခဲ့သလိုပါပဲ - အစစ်အမှန်ဘဝမှာအရာရာဟာညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်ထဲစွဲမှတ်ထားပါ။ ဒါကတကယ်ကိုထူးခြားမှုမရှိပါဘူး၊ သင်ဟာဘယ်ကိစ္စမှာမဆိုမလွှဲမရှောင်သာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာ။ (ပြောတာကလုပ်တာထက်လွယ်တယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုလွှတ်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာ။ )
ကျွန်တော့် Wiener အရွယ်အစားကတော်တော်လေးမကြီးဘူး၊ အားကစားခန်းမမှာအမြဲတမ်းရှက်တတ်တယ်။ ငါကငယ်ငယ်တုန်းကအားကစားရုံနေ့တွေမှာကျောင်းမတက်ချင်တော့ဘူး။
ယခုတွင်ငါသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ရေချိုးပြီးနောက်အားကစားပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုလုံးဝလက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံသည်“ သူတို့သည်ငါ၏အသေးစားကိုရယ်ကြလိမ့်မည်” မှ“ လိင်တံအရွယ်အစားသည်ကောင်းမွန်သောဘဝအတွက်အတားအဆီးမဟုတ်ပါ” သို့“ fuck ဆိုတဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏သေးငယ်သောညီအစ်ကိုများအားလုံးအတွက်ဤအရာကိုယူဆောင်သည်” အထိသွားခဲ့သည်။ သားကောင်ရန်ဝေးကွာသောခြေလှမ်း!
ကြီးမား Dick မထင်မှတ်နဲ့မေတ္တာများအချည်းနှီးသော creepy လိင်ကိုကြည့်မရ, ငါသည်ယုံကြည်သောငါတို့အလောင်းကောင်များ၏လက်ခံမှုမှအကျိုးရှိပါတယ်။
ညစ်ညမ်းတဲ့ယောက်ျားတွေဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပမာဏကြီးမားတာမို့လျှို့ဝှက်ချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ သင်ဟာမလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပြီးသင်ဟာလုံလောက်စွာလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ငါ "အရွယ်အစားအရေးပါသလား?" ကိုစတင်မဟုတ်ပါဘူး ဆွေးနွေးငြင်းခုံသော်လည်းငါသည်လွန်ခဲ့သောလများအတွင်းက porn ကိုမကြည့်တော့သောကြောင့်၊ ငါလူကိုတောင်ဂရုမစိုက်ဘူး ငါလုပ်ခဲ့ဘူးသောမိုက်မဲနှိုင်းယှဉ်ပစ္စည်းပစ္စယများမပို။ ငါပျှမ်းမျှအရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်။ ပြုသမျှစစ်တမ်းများအားလုံးကိုလင့်များ post နိုင်ဘူး, ဒါပေမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ကဒီမှာလျှင်, သင်ပြီးသားပြုပြီးပြီ။ PMO မပါလျှင်သင်သည်သင်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရတော့မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမိမိကိုယ်ကိုစတင်ချစ်မြတ်နိုးလာပါလိမ့်မည်။
2019 သုတေသန: penile တိုးပွားခံယူဖို့အမျိုးသားများရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားသဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် Sociocultural သွဇာမြား: A အရည်အသွေးလေ့လာ
ဗေဒမြင့်တက်ဂျေ 2019 မေလ 20 ။ pii: sjz154 ။ Doi: 10.1093 / asj / sjz154 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
နောက်ခံသမိုင်း: ယောက်ျား၏တိုးပွားလာသူတို့ရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်အတူမကျေနပ်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏လိင်တံအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အလှကုန်ပစ္စည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှာကြသည်။ သို့သော်လျော့နည်းဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစဉ်းစားရန်လူတို့သညျကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။
ရည်ရွယ်ချက်များ: အမျိုးသားများ၏လိင်တံအရွယ်အပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားအပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုရှိသောလူမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအချက်များနှင့် ၀ င်ငွေတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ …
ရလဒ်များ: သုံးခုအဓိက themes များအင်တာဗျူးတွေ, အမည်ရ "ရွယ်တူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်" "ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု" နှင့် "သွယ်ဝိုက်အသွင်အပြင်-related လှော" မှပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ လူတို့သညျညစ်ညမ်းအတွက်အထီးသရုပ်ဆောင်များကို၏ကြီးမားသော penises ပုံမှန်လိင်တံအရွယ်အစားကသူတို့ရဲ့အမြင် skewed သည်ဟုပြောသည်။ ... [အလေးပေးထောက်ပံ့]